Monorail ဆိုသည်မှာ… (၁) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Community & Society » Monorail ဆိုသည်မှာ… (၁)
Monorail ဆိုသည်မှာ… (၁)
Posted by kaungngelay on Sep 24, 2014 in Community & Society, Sciences & Resources | 8 comments
မိုနိုရေးဆိုတာ မိုနို (တစ်)၊ ရေး (ရထားသံလမ်း)၊ အဓိပါယ် ဖွင့်တော့ ရထားလမ်းတစ်လမ်းတည်းပေါ်သွားသော ရထား…. ဒီရထားလေးတွေက တန်ဖိုးရှိတယ်ဗျ…. မွန်ဘိုင်းလို ကားကြပ်၊ လူထူ နေရာမှာ ဒီရထားစနစ်ကြောင့် အတော်လေး သွားရေးလာရေးအဆင်ပြေလာတယ်ကြားတယ်… မရောက်ဘူးပါ… အရက်ဆိုင်မှာတုန်းက သူများပြောပြတာ… Beam လို့ခေါ်တဲ့ သံတန်းရက်မတန်းထူကြီးတစ်ခုပေါ်မှာ ခွညှပ်လိုခွပြီး လျှပ်သွားတဲ့ ရထားတွေပေါ့… ဘူးလက်ထရိန်းလို မမြန်ပေမယ့် မြန်သင့်သလောက်အမြန်နှုန်းနဲ့သွားတယ်… ဒို့ဆီက မြိုပါတ်ရထားလို့ ဂျုတ်ဂျုတ် ဂျက်ဂျက်လေးတော့ မကြားရတော့ဘူး ဆိုဘဲ… ဂျပန် မိုနိုရေးတွေကျတော့ တွဲလောင်းသွားတာ တကယ်လှပါတယ်… ဘက်စ်ကား သုံးစီးစာလောက်တော့ လူတင်နိုင်မယ်ထင်တယ်…. အစားစားပေါ့….
သူရဲ့ ပြေးလမ်းဖြစ်တဲ့ သံရက်မတန်းတွေကို အမြင့်ဘက်မှာ အောက်ပါပုံထဲကအတိုင်း နေရာအကျယ်ကြီးပေးစရာမလိုဘဲ လမ်းလယ်ကျွမ်းလေးတွေနေရာမှာလောက်တင် တည်ဆောက်နိုင်တယ်လို့ သိရပါတယ်… ပတ်ဝန်းကျင် ညစ်ညမ်းမှု၊ အသံဆူညံမှုလည်း နည်းတယ်သိရပါတယ်… ဒါပေမယ့် ပါဝါ (သို့) စွမ်းအင်လိုအပ်ပါတယ်… ဒါလည်း လျှပ်စစ်ပါဘဲ… ရေးမလို့ စဉ်းစား စာဖတ်လုပ်တုန်း အင်မတန်ကောင်းတဲ့ အခြေခံတွေရလိုက်ပါတယ်… ဘာသာပြန်ပြီး အခန်းဆက်ရေးပါမယ်.. မြန်မာလိုလေးလည်း မှတ်တမ်းလေး တစ်ခုဖြစ်အောင်ပေါ့.. ကိုယ့်လိုဘဲ စိတ်ကူးရှိတဲ့သူများလည်း မူးမူးနဲ့ လိုက်ရေးနိုင်အောင် ခေါင်းစဉ်ကို (၁) (၂) သုံးလေး ဆိုပြီး ဝိုင်းဘာသာပြန်ပေးရင် သိပ်ကောင်းမှာပါဘဲ…. လူလည်ကျတာပါ
ဒီလင့်ဒ်လေးမှာ ဖတ်ပေးကြပါ… ဒီထက်ကောင်းတာလေး တွေ့လည်း ပေးပါခင်ဗျာ…
View all posts by kaungngelay →
ရန်ကုန်မြို့လက်ရှိအနေအထားနဲ့ဆို ခုံးကျော်တံတားဆောက်တာထက် အဲဒါမျိုးလေးလုပ်ပေးတာက ပိုထိရောက်မယ်ထင်တယ်။
investor တွေကို အကြောင်းကြားထားပြီ…
အလယ် တွေ လပ် နေပါ့မယ် အေ။
မခိုမကပ် ဆောက်နိုင်တဲ့ ကန်ထရိုက်တာတွေ ပေါ်ပေါက်လာပါစေအူးးး
တကယ်က.. ရန်ကုန်အဝိုင်းပါတ်..မြို့ပါတ်ရထား.. ဂွင်အကျယ်က.. တိုကျိုမြို့ပါတ်.. ယာမနိုတယ်အဝိုင်းပါတ်နဲ့အကျယ်အလျှားသိပ်မကွာဘူးပဲ..
ဟိုက.. တရက်တရက်.. လူတွေမီလီယန်ချီကို… အဆင်ပြေပြေသယ်ပို့ပေးနိုင်တာ..။
တိုကျိုမြို့ထဲ.. မိုနိုရေး(တလမ်းသွားရထားလမ်း) တောင်ရှည်ရှည်လမ်းမရှိ…။
တိုကျိုမြို့ပါတ်အပါအဝင်.. နယူးယောက်မြေအောက်လမ်းအပါအဝင်တွေက.. အပေါ်ကလမ်းမကြီးကို.. တွင်းတူး..လှိုဏ်လုပ်ပြီး.. ရထားလမ်းဆင့်ဆက်ဖောက်တာ…
သဘောက.. ရန်ကုန်ရဲ့ အလုပ်အများဆုံးယဉ်ကြောတခုဖြစ်တဲ့.. ရွေတိဂုံ-ဆူးလှေလမ်းမအောက်မှာ.. လှိုဏ်တူးပြီး.. ရထားလမ်းဖေါက်..။ လှိုဏ်ကို… ကားလမ်းမကြီးအပြည့်စာယူလိုက်ရင်ကို.. မြေအောက်ဈေးတန်းနဲ့.. ရှော့ပင်မော၊ ရုံးခန်းသောင်းချီထွက်လာနိုင်တယ်..။
ရန်ကုန်ရဲ့.. အပ်တောင်း-ဒေါင်းတောင်းချိပ်ထားသမို့.. မြေဈေးကြီးရုံးခန်းခဈေးကြီး..။
ရင်းနှီးမြုတ်နွှသူတွေ.. အရင်းအေးဆေးကြေမယ်…. လို့..
ပြီးခဲ့တဲ့ တပါတ်ကကတင်.. ဓာတ်ရထားနဲ့ပြိုင်ပြီးကားမောင်းနေမိတာ…။ သူကရှေ့ကမောင်းနေတာကနေ.. ထိုးရပ်ပြီး.. တခါးဖွင့်လိုက်တော့.. လူတွေကိုယ့်ကားရှေ့ဆင်းချတာမှ.. တပုံတပင်…။
ရှေးကိုလိုနီခေတ်မြန်မာတွေများ.. မသိ.. ဓာတ်ချည်းထည့်ခေါ်တော့တာပဲနော…။
ဓာတ်ရထား၊ ဓာတ်ပုံ..။ ဓာတ်ရှင်၊ ဓာတ်လုံး..။